PSG oo ku soo biirtay loollanka loogu jiro saxiixa Aubameyang & Laacibkan doorashadiisa oo aan ahayn Ligue 1 – Gool FM
PSG oo ku soo biirtay loollanka loogu jiro saxiixa Aubameyang & Laacibkan doorashadiisa oo aan ahayn Ligue 1
(Paris) 18 Mar 2020. Heshiiska uu Pierre-Emerick Aubameyang kula jiro kooxda Arsenal ayaa dhici doona 2021, welina isaga iyo kooxdiisa ma aysan isla meel dhigin heshiis cusub, taasoo dardar gelinaysa in kooxo badan ay dareenkooda siiyaan.
Inter Milan ayaa si dhow ula socota xaaladda 30-jirkan, waxaana wararku ay sheegayaan in hadda loollankiisa ay ku soo biirtay kooxda Paris Saint-Germain laacibka reer Gabon.
PSG ayaa weyn doonta gooldhaliyaheeda Edinson Cavani, kaasoo qandaraaskiisa uu dhammaanayo xagaaga, halka Icardi uu u laaban doono kooxdiisa Inter marka uu dhammeysto heshiiskiisa amaahda ah, taasoo la micno ah in kooxda reer France ay labo weeraryahan u baahan tahay.
FCInterNews.it ayaa tilmaamaysa in kooxda Thomas Tuchel ay tahay kooxda ay Inter kala kulmi doonto loollanka ugu adag ee saxiixa Aubameyang.
Si kastaba ha ahaatee, laacibka Arsenal ayaa dareen gaar ah u haaya ku laabashada Serie A, halkaas oo uu afar sano kula qaatay Kooxda AC Milan intii u dhaxeysay 2007 illaa 2011.
Majaladda Transfer Market oo soo saartay kala sarreynta qiimaha lacageed ee ay ku fadhiyaan kooxaha ka ciyaara horyaalka La Liga